များတို့ကလွဲလို့ စစ်မှုမထမ်းမနေရ | Saffron People's Movement
January 12, 2011 in မထိတထိ
ရန်ကုန်သားတာတေ Wednesday, 12 January 2011 18:58 ထွေရာလေးပါး
ဦးရုက္ခစိုး၊ ဖိုးရှုပ်၊ ကြွက်စုတ်တို့ နေပြည်တော် ရောက်သွားချိန်တွင် ထူးဆန်းသော မြင်ကွင်းကို မြင်လိုက်ရသည်။ ချိုကုပ်ဒူးကြီးက ဝတ်ဖြူစင်ကြယ်နှင့် စိတ်ပုတီးတကုံးကို လက်တွင် ပတ်ထားသည်။ ချိုကုပ်ဒူးကြီးကတော် ဒေါ်ကွိုင်ကွိုင်က ငိုနေသည်။ ဒု ချိုကုပ်ဒူးကြီး မောင်ကွေးကတော့ ခါးကြားတွင် အရက်ပုလင်းတပုလင်းထိုးကာ အိမ်ထဲမှ အထုပ်များကို သယ်ချ နေသည်။ မောင်ကွေး ကတော်ကလည်း အိုး၊ ခွက်၊ ပန်းကန်များကို အသင့်စောင့်နေသည့် ကားပေါ် ဝိုင်းတင် ပေးနေသည်။
ရုက္ခစိုး။ ။ ဘာတွေ ဖြစ်နေတာလဲဟ။ ငါ့ မျက်စိများ မှားရော့သလား။ ချိုကုပ်ဒူးကြီးကလည်း ဝတ်ဖြူစင်ကြယ် ကြီးနဲ့။
ဖိုးရှုပ်။ ။ ဟုတ်ပါ့ ဦးရုက္ခစိုးရေ။ ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီလဲ မသိဘူး။ ဒေါ်ကွိုင်ကွိုင်ကလည်း ငိုလို့။
ကြွက်စုတ်။ ။ ဒါ အကွက်သစ် ထွင်တာဖြစ်မယ်။ နည်းနည်းလောက် စောင့်ကြည့်ပါဦး။
သူတို့ စကားပြောနေစဉ် ဦးရုက္ခစိုးတို့ကို ချိုကုပ်ဒူးကြီး မြင်သွားသည်။
ချိုကုပ်။ ။ ဦးရုက္ခစိုးပြန်ရင် လိုက်မယ်ဗျာ။ ချင်းမိုင်က ဒွိုင်ဆူထေ့ တောင်ပေါ်မှာ တရားလိုက်ကျင့်မယ်။
ဖိုးရှုပ်။ ။ ဘုရား ဘုရား … တခုခုတော့ လွဲနေတာ အမှန်ပဲ။ အားလားလား။
ဖိုးရှုပ်က အိပ်မက် မက်နေသည်ဟု ထင်သဖြင့် သူ့လက်သူ ဆွဲဆိတ်ကာ နာသွားခြင်းဖြစ်သည်။
ကွိုင်ကွိုင်။ ။ မသွားရဘူး၊ မသွားရဘူး … မောင်တော် သွားရင် နှမတော်လည်း မနေဘူး လိုက်မှာပဲ။
ကြွက်စုတ်။ ။ သူတို့ကိုယ် သူတို့ ဝေဿန္တရာမင်းကြီးနဲ့ မဒီဒေဝီများ မှတ်နေလားမသိဘူး။
အံ့သြစရာ မြင်ကွင်းကို ငေးမောနေမိကြသော သူတို့နားသို့ ချိုကုပ်မောင်ကွေး ရောက်လာသည်။
မောင်ကွေး။ ။ (ခါးကြားထဲမှ ပုလင်းကို ထုတ်ကာ တကျိုက် ကျိုက်ရင်း) အင်း … အခုမှပဲ ရေငတ်ပြေသွားတော့တယ်။ မောလိုက်တာ။
ရုက္ခစိုး။ ။ ဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲဗျ။ ဟိုကလည်း ဝတ်ဖြူစင်ကြယ်နဲ့ တောထွက်တော့မယ်တဲ့။ ခင်ဗျားကလည်း အိမ်ပြောင်းတော့မယ့် ပုံနဲ့။ ဘယ်သူက မောင်းချလို့လဲ။
မောင်ကွေး။ ။ ၃ မိနစ်ပဲ စောင့် … ပြောပြမယ်။
ချိုကုပ်ဒူးကြီး။ ။ လောကီရေးရာ ကိစ္စတွေကို စိတ်ကုန်ပါပြီကွယ်။ ချိုကုပ်ဒူးကြီးဆိုတဲ့ ရာထူး ဂုဏ် ဓနတွေ စည်းစိမ်တွေ ကိုလည်း မမက်မောတော့ဘူး။ အင်း သံယောဇဉ် … သံယောဇဉ်။
ကြွက်စုတ်။ ။ ကြားလား ဖိုးရှုပ်။ ချိုကုပ်ဒူးကြီးက လေးဖြူသီချင်း ဆိုနေပြီ။
မောင်ကွေး။ ။ လေးဖြူသီချင်း ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဇနီး၊ သား၊ သမီး၊ မြေး သံယောဇဉ်တွေကို ဖြတ်ပြီး လောကုတ္တရာ ကိစ္စ ကောင်းရာကောင်းကျိုးတွေပဲ လုပ်တော့မယ်လို့ ပြောနေတာ။
ကွိုင်ကွိုင်။ ။ (မျက်ရည်နှင့် နှပ်ချေးများကို တစ်ရှူးဖြင့်သုတ်ရင်း) မောင်တော်ရယ် … အဲဒီလို မလုပ်ပါနဲ့ မောင်တော်ရဲ့။ အောင်မလေး … သူတော်ကောင်းကြီးရဲ့။ နှမတော် ပါရမီဖြည့်ပါရစေလား … အဟား … အဟား … အဟား။
မောင်ကွေး။ ။ ကဲ … ကဲ … မိန်းမရေ … အားလုံး အဆင်သင့်ဖြစ်ရင် ငါတို့လည်း သွားရအောင်။ ဒီစည်းစိမ်တွေ၊ ရာထူးတွေ ဆိုတာ အလကားပါကွာ။ လောကကောင်းရာ ကောင်းကျိုးတွေပဲ သယ်ပိုးကြတာပေါ့။ လူတွေအတွက် ပေးဆပ်ရမယ့် အချိန် ရောက်ပြီကွဲ့ …။ ချိုကုပ်ဒူးကြီးတောင် ရာထူး စည်းစိမ်တွေ၊ သံယောဇဉ်တွေ စွန့်နိုင်ရင် တို့က ဘာလို့ မစွန့်နိုင်ရမှာလဲကွာ …။
မောင်ကွေး ကားစုတ်ကလေးပေါ်တက်၍ စက်နှိုးပြီး ၁၀ စက္ကန့်ခန့်အကြာတွင် ….
ကွိုင်ကွိုင်။ ။ ရပြီ … ရပြီ။ အားလုံး ………. ကတ် …။ အဲ ယောင်လို့ … အားလုံး နားလို့ရပြီလို့ ပြောတာ။
ချိုကုပ်။ ။ (ခြေပစ်လက်ပစ် ထိုင်ချကာ လက်ထဲမှ စိတ်ပုတီးကိုလွှင့်ပစ်ရင်း) မောလိုက်တာကွာ … ။ ရွှေဖလားတော်နဲ့ ရေခဲရည်ကြည်တော် ဆက်တော်မူကြစမ်း။
တယောက်က ချိုကုပ်ဒူးကြီးကို ရေတခွက်လာပေးသည်။ ဝတ်ထားသည့် ဝတ်ဖြူစင်ကြယ်များကို ဆွဲချွတ်လိုက်ရာ ပြောင်ပြောင် လက်လက်များ ချိတ်ဆွဲထားသည့် စစ်ဝတ်စုံဖြင့် ဖြစ်သွားသည်။
ဖိုးရှုပ်။ ။ ဘာတွေလဲဗျာ …။ နားကို မလည်တော့ဘူး။
ကွိုင်ကွိုင်။ ။ ယတြာခြေတာလေ … ယတြာခြေတာ။ ရာထူးက ပြုတ်ဖို့ ရှိတယ်ကြားလို့ ဒီရာထူး၊ ဒီစည်းစိမ်တွေ မမက်ဘဲ တောထွက်ပါတော့မယ်လို့ ဒီအချိန် ဒီနာရီမှာ ပြော၊ ကျုပ်က ငိုပြီးတားရမယ်လို့ ဗေဒင်က ဟောတယ်လေ။
ကြွက်စုတ်။ ။ ဒါဆို ဟို ချိုကုပ် မောင်ကွေးကကော။ အရူးထပြီး အိမ်ပြောင်းချင်ယောင် ဆောင်တာလား။
မောင်ကွေး။ ။ ဒါလည်း မကွိုင်ရဲ့ ယတြာပဲလေ။ ချိုကုပ်ဒူးကြီး ဂန့်ရင် ကျုပ်ပါ ဂန့်မယ်ဆိုလို့ ရာထူးက ဆင်းပေးပြီး လောကကောင်းကျိုး သယ်ပိုးမယ်ဆိုတဲ့ စတိုင်လုပ်ရမယ်တဲ့။ ကျုပ်ဒီဇိုင်းက မိုက်တယ်မဟုတ်လား။
ပြောပြောဆိုဆို ချိုကုပ်မောင်ကွေးက အရက်ပုလင်းကို မော့လိုက်ပြန်သည်။
ရုက္ခစိုး။ ။ ထင်တော့ ထင်သား။ ဒါက အိပ်မက်မဟုတ်ဘူးဆိုရင် တကယ်တော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့။
ကွိုင်ကွိုင်။ ။ ကဲ မောင်တော် … သိပ်ဇိမ်ယူမနေနဲ့။ အမိန့်ကြေညာစာ တရပ် ထုတ်ဦး။
ချိုကုပ်။ ။ ဘာထပ်ထုတ်ရဦးမှာလဲကွာ။ မင်းပြောလို့ လွှတ်တော်ကို ၁ လပိုင်း ၃၁ ရက် ၈ နာရီ ၅၅ မိနစ်မှာ ခေါ်မယ်လို့ ကြေညာပြီးပြီလေ။
ကွိုင်ကွိုင်။ ။ ဒါက သပ်သပ်။ ဂဏန်းအားလုံးပေါင်းရင် ၉ ရအောင် မနည်းရှာကြံလုပ်ထားရတာ။ ကိုးနဝင်း ကျေအောင်ပေါ့။ နောက်တခု ကြေညာရမှာက … အရာရှိတွေအားလုံး အိမ်ရှေ့မှာ တပွင့်ကြာပင် စိုက်ရမယ်လို့ စာထုတ်။
ချိုကုပ်။ ။ အဲဒါကကော ဘာအတွက်လဲ။
ကွိုင်ကွိုင်။ ။ အဲဒါက … တပွင့်တည်းကြာမယ်။ တယောက်တည်း ရာထူးမှာ ကြာမယ် မြဲမယ် ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။ ကဲ ချိုကုပ်မောင်ကွေးလည်း အိမ်ပြန်ပြီး ကြာပင်စိုက်။ ကျမလည်း အိမ်ရှေ့မှာ စိုက်ထားပြီးပြီ။
ချိုကုပ်မောင်ကွေးတို့ လင်မယား အထုပ်များပြန်သိမ်းပြီး အိမ်ပြန်သွားကြသည်။
ချိုကုပ်။ ။ ဟုတ်ပါပြီကွာ …။ ထုတ်လိုက်ပါမယ်။ ဒါပဲလား။ လွှတ်တော်အတွက် ငါ ပြင်စရာလေးတွေ ရှိသေးတယ်။
ဖိုးရှုပ်။ ။ လွှတ်တော်မှာ တင်သွင်းမယ့် ကိစ္စတွေ၊ သမ္မတ ရွေးဖို့ ကိစ္စတွေ ပြင်ဆင်မှာပေါ့ ဟုတ်လား ချိုကုပ်ဒူးကြီး။
ကြွက်စုတ်။ ။ ဒီလိုတော့လည်း ချိုကုပ်ဒူးကြီးက တကယ်လုပ်တော့မယ် ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်။ အရပ်သား အစိုးရကို တကယ် လွှဲပေးပြီး ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို တကယ်သွားတော့မှာပေါ့ ဟုတ်လား။
ချိုကုပ်။ ။ ဘာတွေ လာပြောနေတာလဲ။ လွှတ်တော်အတွက် ပြင်မယ်ဆိုတာက ရန်ကုန် အမျိုးသားပြတိုက်က သီဟာသန ပလ္လင်ကြီးကို ရွှေ့ခိုင်းမလို့။
ရုက္ခစိုး။ ။ ဟာ … အဲဒီလိုလုပ်ရင် ရှေးဟောင်းသုတေသနတွေ၊ သမိုင်းသမားတွေနဲ့ ကွိုင်မယ်ထင်တယ်နော်။
ချိုကုပ်။ ။ ဒါဆိုလည်း လွယ်ပါတယ်။ အဲဒီပလ္လင်နဲ့ တပုံစံတည်းတူတဲ့ ပလ္လင်တခုကို ပုံတူမျိုးပွားလိုက်၊ ပြီးရင် အဲဒီပလ္လင်တော်က ဓာတ်ကူးသလို ဖြစ်အောင် ၉ ရက်တိတိ အတူတူထား ပြီးမှ သယ်ခိုင်းလိုက်မှာပေါ့။
ဖိုးရှုပ်။ ။ အဲဒီပလ္လင်ကြီးက ဘာလုပ်ဖို့လဲ ချိုကုပ်ဒူးကြီးရဲ့။
ချိုကုပ်ဒူးကြီးက ဇာတ်ထဲမှ ဘုရင်လေသံဖြင့် “ငါကိုယ်တော်မြတ် လွှတ်တော်ဝင်တဲ့အခါ ထိုင်တော်မူဖို့ပေါ့ကွဲ့” ဟု ပြန်ဖြေလိုက်သည်။
ကြွက်စုတ်။ ။ (ဦးရုက္ခစိုးနှင့် ဖိုးရှုပ်ဘက်လှည့်၍) ပြန်ကြရင်ကောင်းမယ်နဲ့ တူတယ်နော်။ တော်ကြာ ကျနော်တို့ကိုပါ ဝန်ကြီးတွေ၊ မူးမတ်တွေလို ဝတ်ခိုင်းပြီး ခစားခိုင်းနေမှဖြင့်။
ချိုကုပ်။ ။ ဘယ်ရမလဲ … ဒီတိုင်းတော့ မောင်မင်းတို့ ပြန်လို့မဖြစ်သေးဘူးကွဲ့။ တိုင်းပြည်အတွက် စစ်မှုထမ်းပြီးမှ ပြန်ကြရမယ်။
ရုက္ခစိုး။ ။ ကျုပ်နဲ့မဆိုင်ဘူးနော်။ ကျုပ်က နတ်။ ဖိုးရှုပ်နဲ့ ကြွက်စုတ်ကိုပြော။
ဖိုးရှုပ်။ ။ ဟာ … မလုပ်နဲ့လေ ဦးရုက္ခစိုး … ကျနော် စစ်ထဲ မဝင်ချင်ဘူးဗျ။
ကြွက်စုတ်။ ။ ကျနော်က ကြွက်စုတ်ဆိုတော့ … ဥပဒေထဲမှာ ကြွက်တွေအတွက် မပါဘူး မဟုတ်လား။ ကျနော် မှတ်ပုံ မတင်တော့ဘူးနော်။
ဖိုးရှုပ်။ ။ ကျနော်ကလည်း … ကျနော်ကလည်း … သက်ကြီးရွယ်အိုကို စောင့်ရှောက်နေရလို့ ပို့စ်ပွန်း လုပ်ပါရစေ။
ချိုကုပ်။ ။ မောင်မင်းက ဘယ် သက်ကြီးရွယ်အိုကို စောင့်ရှောက်နေရလို့လဲ။
ဖိုးရှုပ်။ ။ ဦးရုက္ခစိုးလေ … ။ ဦးရုက္ခစိုးက နတ်ဆိုတော့ အသက်က အနည်းဆုံး ထောင်ချီနေပြီ … ဟုတ်တယ်နော် ဦးရုက္ခစိုး။
ချိုကုပ်။ ။ ဒါဆို မောင်မင်းတို့ ၂ ယောက်က စစ်မှုမထမ်းရအောင် ကြံဖန် ရှောင်လွှဲတဲ့အတွက် ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ်။
ကြွက်စုတ်။ ။ ဟာ အဲဒီလိုကြီးလား။ ရတယ်လေ (ဖိုးရှုပ်ကို လက်တို့ကာ) ဒါဆို … များတို့ အခုပဲ ခြောက်သွားပြီ။ များတို့အတွက် ဥပဒေ မပါဘူး မဟုတ်လား။
ချိုကုပ်ဒူးကြီးက ကြွက်စုတ်ကိုကြည့်လိုက် … သူ့ဥပဒေ မူကြမ်းကို ကြည့်လိုက်ဖြင့် ကြောင်တက်တက် ဖြစ်နေစဉ် ဖိုးရှုပ်ကလည်း မျက်စကိုချီ၍ “ဟုတ်တယ် … လူကြီးနော် … ကလိန်ကကျစ်မလုပ်နဲ့ … သွပ်ပြားတို့အတွက် ဥပဒေ ထုတ်ပြီးမှပြော” ဟု ပြောလိုက်သည်။
ချိုကုပ်။ ။ ဟုတ်တော့ ဟုတ်တယ် … အဲဒါတွေအတွက်တော့ ဥပဒေထဲမှာ မပါသေးဘူး။
ဖိုးရှုပ်နှင့် ကြွက်စုတ်တို့မှာ ပုဆိုးများကို ထဘီကဲ့သို့ ပြင်ဝတ်၍ ချိုကုပ်ဒူးကြီးရှေ့တွင် ခေါက်တုန့် ခေါက်ပြန် မော်ဒယ်ဂဲလ် များစတိုင် ၂ ခေါက်ခန့် လျှောက်ပြလိုက်ကြသည်။
ထို့စဉ် ဦးရုက္ခစိုးက “ပြေးနိုင်မှ လွတ်မယ်ဟေ့” ဟု အချက်ပေးလိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက်တည်း ၎င်းတို့ ထုံးစံအတိုင်း ဖနောင့်နှင့်တင်ပါး တသားတည်းကျအောင် ထိုနေရာမှ ထွက်ပြေးကြရလေတော့သတည်း။